Product Assembly - Chapman Technology Co., Ltd.
Amin'ny dingan'ny fampandrosoana ny vokatra, ny ampahan'ny fivoriambe dia iray amin'ireo departemanta manan-danja indrindra aminay. Avy amin'ny fitsapana vokatra, fivoriam-bokatra, fandefasana vokatra vita, ireo tontolon'ny asa, fivoriambe dia toa zava-dehibe.
Mizara atrikasa fivoriambe roa ho an'ny vokatra elektronika sy elektrika ary vokatra ara-pahasalamana isika. Ao amin'ny sampana fivorian'ny vokatra elektronika sy elektrika dia manana rafitra fiarovana izahay amin'ny fiarovana ny setroka sy ny afo. Ao amin'ny departemantan'ny fivorian'ny vokatra ara-pitsaboana, mikasa ny hametraka rafitra fifamoivoizana amin'ny taona 2021 izahay mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fenitra rafitra kalitao ISO: 13485 ny tontolon'ny atrikasa fivoriambe.
Ho an'ny ankamaroan'ny orinasa, mandany fotoana sy lafo ny fanangonana tanana. Manolotra vahaolana namboarina izahay, avy amin'ny fiarahana tsotra amin'ny fananganana sarotra sy fivoriambe. Hanolotra teny fohy, fiodinana haingana, fandaharam-potoana miovaova ary valin'ny kalitao izahay.
Chapman Makerdia natokana hamokarana vahaolana marolafy izay manitatra ny fahafahan'ny orinasanao. Miaraka amina fonosana vokatra manokana, fivoriam-bokatra ary famonoana vokatra dia tsy mora velively ny nitondra ny nofinofisinao ho amin'ny fiainana. Ny ekipa mangoraka anay dia manolo-tena hamorona vahaolana vokatra tany am-boalohany izay maneho ny tanjon'ny orinasa, mandrindra ny famokarana ary manamora ny asa. Ary miaraka amin'ireo fotodrafitrasa any Dongguan, azonay atao ny mitondra ny mombamomba anay amin'ny famokarana ho an'ny mpihaino marobe, manome ny fanohanan'ny manam-pahaizana izay afaka manova ny endrika asan'ny orinasanao.
Chapman Maker'sny fivorian'ny vokatra sy ny fonosana dia mampisondrotra ny andrasana amin'ireo orinasa fanatanterahana ny antoko fahatelo, manitatra ny tontolon'ny asa araka ny ahalalantsika azy. Mampiasà tanana mahay sy mahay mandanjalanja, haitao mivoatra, ary tontolo iainana miavaka, hivondrona ireo vokatrao ary hasiana fika sy marina. Ary miaraka amina ekipa mpamorona famoronana, fisafidianana famatsian-dàlana malalaka ary fijerena akaiky ny antsipirihany, ny tahirinao dia hamboarina sy ho fonosina amin'ny fahasarotana sy ny fahamehana tsy manam-paharoa.